Deg Deg: Maxamed Ibrahim Macalumu oo ku dhaawacmay Qaraxii Muqdisho “Isbitaal ayaa loola cararay” |
Deg Deg: Maxamed Ibrahim Macalumu oo ku dhaawacmay Qaraxii Muqdisho “Isbitaal ayaa loola cararay”
Warar kale oo haatan kusoo dhacay warqabadkeena Muqdisho ayaa sheegaya in dadkii waxyeelada kasoo gaartay qaraxii Ismiidaaminta ahaa uu ku jiro Wariye Caan ah
Sargaal katirsan shaqaalaha Isbitaal Banaadir ayaa isagoo kusugan halka qaraxa uu ka dhacay waxaa uu inoo sheegay in Warihii Idaacada BBC-da ee magaalada Muqdisho Maxamed Ibaarim Macalimow uu ku dhaawacmay qaraxaas.
Warka waxaa uu intaas ku darayaa in Wariyahan uu soo gaaray Firirka qaraxan xili uu marayay wadada qaraxa uu ka dhacay.
Sidoo kale Sarkaalkaan dhanka cafimaadka ah ayaa waxa uu sheegay in Macalimow loo qaaday dhanka Isbitaal Madiina isaga oo intaa raaciyay in darawalkii gaariga ku ka xeynayay uu soo gaaray dhaawac halis ah.
“Macalimow gaarigiisa oo marayay agagaarka halka wax ka dheceen ayaa waxaa gaaray bur bur xooggan isagiina gacanta ayaa wax ka gaareen. Jirkiisa waxba kama muuqdaan hasa yeeshee garabka ayaa wax ka gaareen Isbitaal Madiina ayaa loo qaaday. Darawalkiisa dhaawac halis ah ayaa kamuuqday”, sidaa sarkaalkaan ayaa sheegay.
Sidoo kale qaraxan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac kale oo badan, iyadoo dadka waxyeelada ugu badan ay soo gaartay ay yihiin shacab caruur ubadan
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Amisom ayaa isku gadaamay halka qaraxa uu ka dhacay waxaana soconaya Howlgallo Balaaran.